Mazava ho azy fa Fsnd ils fotoana hafa?
fanontaniana Mazava ho azy fa Fsnd ils fotoana hafa?
1 taona 8 volana lasa izay - 1 taona 8 volana lasa izay #644 by ricsmi
Hello ahy indray.
Aho alaina ny upgraded cockpit ny defualt 747 sy ny tena tsara, fa ny hany manana olana aho dia rehefa te-hanorina ho ILS fipetrahana maro tsy toa fomba rehetra mba hametraka ny sasin-tenin'ny Mazava ho azy, amin'ny cockpit teo aloha no nanorina azy amin'ny alalan'ny Nav maneho fa nanomboka tamin'ny vaovao dia manana ny rafitra gpws ny nolonger any.
Ahoana no hanao izany?
(Edit) izany ity iray ity. www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/55/568
Misaotra ry zalahy.
Last edit: 1 taona 8 volana lasa izay ricsmi.
1 taona 8 volana lasa izay - 1 taona 8 volana lasa izay #645 by Gh0stRider203
Tsy manahirana matetika amin'ny Mazava ho azy fa toy ny rehefa mihidy ny tao an-ILS, araka izay mitarika tenany amin'ny nidina ny glideslope.
anao fotsiny mba hametraka ny NAV1 ny mety freq, ary hanova fomba Nav avy GPS mba Nav (aho Ctrl + Shift + N) nifatotra noho izany ka tsy voatery mampiasa ny totozy.
ary mazava ho azy mba hanatona fanovana Fikarohana
Last edit: 1 taona 8 volana lasa izay Gh0stRider203.
1 taona 8 volana lasa izay - 1 taona 8 volana lasa izay #646 by ricsmi
Oh OK aho dia manontany tena momba ny toerana Mazava ho azy, tsara ny mahafantatra izany na tsy izany dia midika hoe tsy faffage nandritra ny fipetrahana. XD
1 taona 8 volana lasa izay #647 by Gh0stRider203
Eny Vao avy nametraka Nav 1 ny mety freq, ary indray mandeha aho eh! .... ao anatin'ny 20mi ny seranam-piaramanidina, ary nilahatra ny fiaingana (Tiako ela fomba) sy amin'ny manodidina FL300, aho handrehitra azy amin'ny GPS ho Nav, ary raha ny "baolina" mampiseho ny mamadibadika azy aho avy Vor Loc (fara fahakeliny, Mino aho fa izay no voalaza LOL aho ao amin'ny C-130 CPE amin'izao fotoana LOL), ny APP ary hihaino azy io Me in. rAHA avo loatra aho hidina aho ny Altitude mandra-Alt HLD mazava dia eny amin'ny izay fotoana, niaraka fotsiny aho ny mitaingina LOL
Fotoana mamorona pejy: 0.195 segondra